China CNC Pipe na efere Laser Cutting Machine emepụta na suppliers |UNIONLASER
Ọnụ ahịa: $21999~$28999(kpọtụrụ m)
Akwụkwọ ikike:3 afọ maka igwe, 2 afọ maka eriri laser isi iyi, ma e wezụga ndị yi akụkụ.
Mgbe ị na-ahọrọ efere & tube eriri laser ọnwụ igwe?
1. Your ọnwụ ihe dị iche iche metal ihe dị ka igwe anaghị agba nchara, brass, aluminum, carbon ígwè wdg.
2. Mgbe ị chọrọ igbutu efere na tube, tumly ịcha efere.
1. Ọdabara ma ọkpọkọ na ịkpụ efere.
2. High ọkpụrụkpụ metal etiti na-arụ ọrụ bed, esichara site na-ekpo ọkụ quenching, ọzọ mụ na-arụ ọrụ bed Ọdịdị, na zones uzuzu wepụ ọrụ.
3. Free gị aka, Focal ogologo na-achịkwa sistemụ.Ọ dịghị anyị mkpa ịme ụkpụrụ ntuziaka, nke na-ezere njehie ma ọ bụ mmejọ nke ọrụ ntuziaka kpatara.
4. Higher ọnwụ àgwà na arụmọrụ, ịcha ọsọ bụ ruo 80m / min na anya na mara mma ọnwụ onu.
Mpaghara ọrụ 1500*3000mm
Ịcha ogologo ọkpọkọ 3000mm, 6000mm
Ịcha dayameta 20-220 mm
Ike Laser 1000w, 2000w, 3000w, 4000w, 6000w
Sistemụ Rack Ụdị YYC 2M
Usoro njikwa Sistemụ mbelata cypcut
4mm ọkpụrụkpụ Sawteeth tebụl na-arụ ọrụ
Q1: Kedu maka akwụkwọ ikike?
A1: 3 afọ ikike akwụkwọ ikike.A ga-agbanwe igwe nwere akụkụ ndị bụ isi (ewezuga ihe oriri) n'efu (a ga-edobe akụkụ ụfọdụ) ma ọ bụrụ na nsogbu ọ bụla n'oge oge ikike.The igwe akwụkwọ ikike oge na-amalite na-ahapụ anyị factory oge na generator amalite mmepụta ụbọchị nọmba.
Q2: Amaghị m nke igwe dabara m?
Q3: Ọ bụghị adaba m na-aga China, ma m chọrọ ịhụ ọnọdụ nke igwe na factory.Kedu ihe m kwesịrị ịme?
A3: Anyị na-akwado ọrụ visualization mmepụta.Ngalaba na-ere ahịa nke na-aza ajụjụ gị maka oge mbụ ga-ahụ maka ọrụ nsonye gị.Ị nwere ike ịkpọtụrụ ya / ya ka ọ gaa na ụlọ ọrụ anyị iji lelee ọganihu mmepụta nke igwe, ma ọ bụ zitere gị foto na vidiyo ị chọrọ.Anyị na-akwado ọrụ nlele n'efu.
Q4 : Amaghị m ka esi eji mgbe m nwetara ma ọ bụ enwere m nsogbu n'oge eji, otu esi eme?
A4: 1) Anyị nwere nkọwa onye ọrụ ntuziaka na foto na CD, ị nwere ike ịmụta nzọụkwụ site nzọụkwụ.Na mmelite akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ anyị kwa ọnwa maka mmụta dị mfe gị ma ọ bụrụ na enwere mmelite ọ bụla na igwe.
2) Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla n'oge ojiji, ị chọrọ anyị technician ikpe nsogbu n'ebe ndị ọzọ a ga-edozi site anyị.Anyị nwere ike ịnye ndị na-ekiri otu / WhatsApp / email / ekwentị / Skype na cam ruo mgbe edozi nsogbu gị niile.Anyị nwekwara ike ịnye ọrụ ọnụ ụzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Nke gara aga: CNC Pipe Laser Cutting Machine nwere eriri Laser isi iyi
Osote: 12000w 20000w eriri laser ọnwụ igwe